eHimalaya Online || News from nepal » ७० बर्षको यात्रा … अन्तिम सास सम्म एक अर्काको साथ, यी जोडिबाट केही सिक्ने कि?
७० बर्षको यात्रा … अन्तिम सास सम्म एक अर्काको साथ, यी जोडिबाट केही सिक्ने कि?
२०७७ माघ ३० गते शुक्रबार १२:०५
अन्तिम सास सम्म एक अर्को सँग ७० बर्षको यात्रा। वास्तवमा, चित्र डेरेक र मार्गरेट फेर्थको हो, जो ब्रिटेनको पार्टिंगटनमा बस्ने एक पति र पत्नी हो। मार्गरेट फार्थ र डेरेक नाम गरेका यस दम्पतीले कोविड १९ को सं,क्र मणको कारण अस्पतालमा अन्तिम...
अन्तिम सास सम्म एक अर्को सँग ७० बर्षको यात्रा। वास्तवमा, चित्र डेरेक र मार्गरेट फेर्थको हो, जो ब्रिटेनको पार्टिंगटनमा बस्ने एक पति र पत्नी हो। मार्गरेट फार्थ र डेरेक नाम गरेका यस दम्पतीले कोविड १९ को सं,क्र मणको कारण अस्पतालमा अन्तिम सास लिए त्यो पनि एक अर्काको हात समात्दै। यी दुबै जोडीको उमेर ९१ वर्ष हो। दुई जोडीको गत हप्ता ट्राफर्ड जनरल अस्पतालमा कोरोनाको कारण मृ, त्यु भयो।
पर्टिगनमा बस्ने यस दम्पतीको प्रेम पनि बाल्यावस्थाको थियो। १४ वर्षको उमेरमा दुबै प्रेममा परे र एक अर्कासँग विवाह गरे। यी जोडीहरू बीचको आपसी संलग्नता देखेर अस्पतालका कर्मचारीहरूले यी दुई जोडीहरूलाई सँगै बनाए ताकि तिनीहरू म,र्नु अघि अन्तिम पटक एक अर्कालाई भेट्न सकून्। उनीहरू बीचको असीम प्रेम देखेर, व्यक्तिहरू सोशल मिडिया मार्फत श्रद्धांजलि दिए।
डेरेक र मार्गरेटकी जेठी छोरी बार्बरा स्मिथले बताइन् कि बुबा पहिले बिरामी भए र पछि आमा डाक्टरहरूले सोचे कि मार्गरेट डेरेक बिना लामो समय सम्म बाँच्न सक्दिन। यस्तो अवस्थामा उसले डेरेकलाई पनि उही अस्पतालमा भर्ना गरिदिए। अन्ततः डेरेक ३१ जनवरी मा सास छोडे र ३ दिन पछि मार्गरेट फेर्थको मृ, त्यु भयो। मृ, तक दम्पतीका ५ बच्चा, ११ जना नातिनातिना र चार पनाति पनातिना छन्। परिवारले अन्त्येष्टिको मिति तोकेको छैन, तर परिवारले आशा गर्दछ कि यो संयुक्त समारोह हुनेछ।
प्रकाशित मिति २०७७ माघ ३० गते शुक्रबार १२:०५